Nanendry firenena tsara indrindra hitsidihana i Chili amin'ny taona 2018
Home » Toerana fitsangatsanganana » Nanendry firenena tsara indrindra hitsidihana i Chili amin'ny taona 2018
Oktobra 25, 2017
I Chile no laharana voalohany amin'ny firenena hitsidika ny taona manaraka amin'ny lisitra Best in Travel 2018
Lonely Planet dia nametraka an'i Chile ho firenena voalohany hitsidika ny taona manaraka amin'ny lisitra Best in Travel 2018 efa nandrasana.
Ny orinasan-torolàlana momba ny dia, izay mamokatra atiny amin'ny fiteny mihoatra ny 14 ary manana mpanaraka maherin'ny 13 tapitrisa ao amin'ny media sosialy, dia namoaka ny andiany faha-13 ny lisitra fanao isan-taona amin'ireo firenena 10 voalohany tokony hananan'ny mpandeha amin'ny lisitry ny siny ho an'ny 2018 omaly.
I Chile irery no firenena amerikana tatsimo nahazo toerana tamin'ny lisitra ary nilahatra voalohany tamin'ny sokajy Countries izay nahitana an'i Portugal, Nouvelle Zélande, Sina ary Afrika Atsimo ihany koa. Lonely Planet koa dia namokatra horonantsary iray momba an'i Chile manazava ny antony nisafidianana azy ireo ho firenena tsara indrindra hitsidihany amin'ny taona 2018 natolotry ny mpanoratra Lonely Planet, Mark Johanson. Ny sokajy Top 10 Countries dia iray amin'ireo sokajy efatra tao amin'ilay lisitra izay misy koa ny faritra 10 ambony, ny tanàna 10 ambony ary ny toerana kendrena 10 tsara indrindra.
Lonely Planet's Best in Travel list dia nofinidin'ny mpandeha za-draharaha indrindra amin'ny alàlan'ny torolàlana ary nandinika ireo toerana notoroana hevitra an-jatony manerantany. Ny fari-pifidianany dia misy ny zava-mitranga ankehitriny, ny tolotra fizahan-tany mahavariana ary ny fahasamihafana amin'ny fizahan-tany fizahan-tany ho any izay anton-javatra rehetra amin'ny fanapahana ny top 10 farany farany.
“Vaovao lehibe ho an'i Silia io fanavahana io ary manamafy ny fampielezan-kevitry ny governemanta amin'ny fahombiazana amin'ny fivarotana firenena ho toy ny toerana tsy maintsy zahana fizahan-tany iraisampirenena. Ary manamarina izany koa ny antontan'isa, miaraka amina mpizahatany vahiny 5.5 tapitrisa amin'ny 2016, "hoy ny Undersecretary momba ny fizahantany, Javiera Montes.
Ny talen'ny Sernatur Marcela Cabezas dia nanamafy ihany koa fa, "ny fankatoavana an'i Lonely Planet dia loka iray izay azon'ny Chileana rehetra atao rehareha satria manasongadina ny hatsaran'ny natiora eto amin'ny firenentsika sy ny fahaiza-mandray vahiny miavaka ao aminy. Ity fanekena ity dia avy amin'ny fanavahana antsika vao haingana amin'ny maha-lohan'ny fizahan-tany fizahan-tany any Amerika atsimo 2017 amin'ny World Tourism Awards. "
Hong Kong Airlines mankalaza ny fandefasana ny Embrace the World and Cadet Pilot Program
Shangri-La's Rasa Ria Resort & Spa dia mandray ny General Manager vaovao